Cajal: Koritaanka Plugin WordPress
WordPress CMS wuxuu leeyahay caymiska adduunka oo idil ee codsiyada shabakadaha kala duwan. WordPress wuxuu ku siinayaa bilawga iyo bar-barbooliyeyaasha karti-galin lagu kalsoon yahay si loo dajiyo oo loo martiyo goobahooda. Waxay leeyihiin habab xoogan oo aqoon u leh inay sameeyaan barnaamij sharci ah si ay u fuliyaan hawlahooda. Wixii WordPress ah, dadka isticmaala waxay abuuri karaan bogag iyo waxay u habeeyaan mawduucooda iyaga oo u maraya siyaabo kala duwan - criar um site totalmente gratis agora. In SEO, mid ka mid ah siyaabaha ugu muhiimsan ee loo hagaajin karo shaqada ama mawduucaaga waa iyada oo loo marayo plugins.
Plugins waa jaangooyooyin yar yar oo PHP xambaarsan oo ku jira qaabka furaha oo beddelaya sifooyinkaaga mawduuca. Tilmaamahan SEO-ga ah, waxaynu xallin doonaa dhinacyada kala duwan ee horumarinta plugin. Waxaad ogaan doontaa baahida loo qabo miisaaniyada iyo sidoo kale waxa loo yaqaan 'plugins' si loo dhiso. Qof kasta wuxuu abuuri karaa plugin WordPress oo leh aqoon aasaasi ah PHP. Waxay ku lug leedahay aqoonta qaab dhismeedka faylka WordPress iyo sidoo kale guddiga maamulka
Andrew Dyhan, oo ah khabiir hormuud u ah Semt , wuxuu halkan ka bixiyaa arrimo adag oo ku saabsan arrintan
Sababaha ay dadku u kobciyaan furaha
Plugins wuxuu kor u qaadaa habka aan u shaqeyno. Waxaad si dhakhso ah ugu dari kartaa muuqaal dheeraad ah mawduucaaga iyada oo la adeegsanayo plugins. Plugins waxaa ku jira qulqulo shaqeynaya iyada oo aan wax ka badalin xeerka ugu muhiimsan ee boggaaga. Faylasha PHP waxaa lagu dhejiyaa qaabka faylka WordPress. Isbedelkan wuxuu leeyahay fursado badan oo loogu talagalay dadka u baahan kara inay soo bandhigaan muuqaalada cusub boggooda.
Sida CMS-da caanka ah, WordPress wuxuu leeyahay waxyaabo aad u sareeya kuwaas oo ka dhigaya midka ugu badan ee la heli karo ee u dhow ama fog. Iyada oo ah horumariye website, waxaa loo baahanyahay in lagu dabacsanaado xakamaynta dambe ee dambe. Sidoo kale, horumarinta PHP waxay lacag ka qaadaan lacag badan si ay u qabtaan hawlaha fudud sida horumarinta plugin. Waxaad ku baran kartaa sida loo kobciyo plugin WordPress oo keydso hantida. Waxaa intaa dheer, API way fududahay in la isticmaalo oo wax barto.
Aqoonta widgetka, iyo sidoo kale dhinacyada kale ee WordPress, ayaa lagama maarmaan u ah horumariye..Way sahlan tahay in la ogaado sida ay u shaqeeyaan nidaamyada sahlan ee ogaanshaha dhibaatooyinka.
Abuuritaanka WordPress plugin
Ku xirnaanta WordPress waa faylasha PHP oo saafi ah. Si aad u abuurto mid, waxaad u baahan tahay inaad abuurto faylka ku jira buugga tusaalayaasha iyo ku dar feyl kale oo PHP ah. Magaca faylka waa inuu la mid yahay magaca faylka. Tani waa inay ka shaqeeyaan mawduucaaga faylka faylka ee faylasha. Isbedelada ayaa laga yaabaa in lumo haddii aad bedesho mawduuca
Halkan, waxaad ubaahan tahay inaad doorato mawduuca mawduuca. Madaxa waxaa ku jira macluumaad gaar ah oo ku saabsan fiilooyinkaaga. Macluumaadkan waxaa ku jiri kara magaca, sharaxa, qoraaga ama xitaa version. Hoos waxaa ku qoran tusaaleyn madax-madaxeedka oo dhan;
Magaca Plugin Name: Plugin
Kitaabka Quduuska ah (Vi)
Qoraaga: Magaca Fadlan
Sharaxaad: Maxaa kuugu ekaysiinayaa
Kani waa fiilo dhammaystiran oo aad soo jeedin kartid ama ka bixi kartid cirifka admin. Si kastaba ha ahaatee, plugkani ma qaban karo hawl kasta. Waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad ku darto lambarro badan iyo shaqooyin si ay u qabtaan hawlaha aad u baahan tahay. Tusaale ahaan, waxaad samayn kartaa hawsha adigoo ku daraya hawl:
add_action ('save_post', 'wargelin');
Markaad buuxiso plugin, xasuuso inaad gashato oo rakibo. Tani waa sida keliya ee isbeddelku u dhaqmi karaan.